१३:४३, ४ सेप्टेम्बर २०१८ जस्तै गरी पुनरावलोकन
३७७ बाइटहरू हटाइयाे , २ वर्ष अघि
१३:५२, ६ अगस्ट २०१८ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने)
१३:४३, ४ सेप्टेम्बर २०१८ जस्तै गरी पुनरावलोकन (सम्पादन गर्ने) (रद्द गर्ने)
14.0.180.209 (कुरा गर्ने)
चिनोहरू: मोबाइल सम्पादन मोवाइल अनुप्रयाेग सम्पादन एन्ड्राेइड अनुप्रयाेग सम्पादन
किराँत भनेको नेपालका मुल्बासी जाति हो. किराँतहरूको बसोबास नेपालको पूर्ब र हिमाल सम्म फैलिएको छ. यो जाति भनेको नेपाल्को सबै भन्दा प्राचीन जाति हो र नेपाल्मा खेतिको सुरुवात् गर्नुका साथै सुङुर पालन आरम्भ गरेको हुन. [[काठमाडौं|काठमाडौं]]का नेवा राजालाई हटाएर [[यलम्बर]] पहिला किराँती राजा भएका थिए. [[जनबादी गणतन्त्र चीन|चीन]]को [[तिब्बत]]सग इनिहरूले निक्कै रम्रो बेपार् गरेका थिये. त्यस्तो बेपार् अहिले सम्मको सर्कार्ले गर्न सकेको छैन. किन भने त्यतिबेलाको नेपाली मुद्रा तिब्बेत्मा चल्थियो. र मुख्य कुर के भने इ किरात जातिको उत्पति चिन् मै भयेको हो. [[जनबादी गणतन्त्र चीन|चीन]]को ह्यन्ग्गो र यान्सिकन्ग् भन्ने नदिको किनार्मा भयेको तथ्य फेला परेको छ. र त्यहा कुरा शिकार् गर्न भारतको उत्तर् पूर्वि पहाड् तिर आये र त्यहाको [[कैलाश]] पहाड्मा केही बर्स बसेको इतिहास् म पड्न पाइन्छ्. र त्यहा कुरा अनुकुल् हावा पानीको खोजिमा नेपाल्को पूर्वि भाग् हुदै काठमाडौंसम्म आइपुगेको हो. र अहिले सम्म इनिहरूले राज्नीतिक् शैशिक् छेत्रम धेरै विकास् गरेको छ.▼
▲किराँत भनेको नेपालका मुल्बासीमुलबासी जाति हो. किराँतहरूको बसोबास नेपालको पूर्ब र हिमाल सम्म फैलिएको छ. यो जाति भनेको नेपाल्कोनेपालको सबै भन्दा प्राचीन जाति हो र नेपाल्मानेपालमा खेतिको सुरुवात् गर्नुका साथै सुङुर पालन आरम्भ गरेकोगर्ने यिनै जाती हुन. [[काठमाडौं|काठमाडौं]]का नेवा राजालाई हटाएर [[यलम्बर]] पहिला किराँती राजा भएका थिए. [[जनबादी गणतन्त्र चीन|चीन]]को [[तिब्बत]]सग इनिहरूले निक्कै रम्रो बेपार् गरेका थिये.थिए। त्यस्तो बेपार् अहिले सम्मको सर्कार्लेसरकार्ले पनि गर्न सकेको छैन. किन। भनेकिनभने त्यतिबेलाको नेपाली मुद्रा तिब्बेत्मा चल्थियो.चल्थियो। र मुख्य कुर के भने इ किरात जातिको उत्पतिउद्द्गम चिन्स्थल मैपनि चिन नै भयेको हो.अनुमान छ।[[जनबादी गणतन्त्र चीन|चीन]]को ह्यन्ग्गो र यान्सिकन्ग् भन्ने नदिको किनार्माकिनार भयेकोलाइ तथ्यकिरात फेलाउद्द्गम परेकोस्थल छ.मानिएको छ। र त्यहा कुराबाट शिकार् गर्न भारतको उत्तर् पूर्वि पहाड् तिर आये र त्यहाको [[कैलाश]] पहाड्मा केही बर्स बसेको इतिहास् म पड्न पाइन्छ्. र त्यहा कुरा अनुकुल् हावा पानीको खोजिमा नेपाल्को पूर्वि भाग् हुदै काठमाडौंसम्म आइपुगेको हो. र अहिले सम्म इनिहरूले राज्नीतिक् शैशिक् छेत्रम धेरै विकास् गरेको छ.छ।
नेपालका जनजातिहरू मध्ये महत्वपूर्ण मतवालि परम्परा राख्ने जाति किराँतहरू नै हुन्, यो जातिलाई प्राचीन पौराणिक ग्रन्थहरूले झग्रालु समबादी, लुत पात मचाउने जातिका रूपमा पनि लिएको पाइन्छ ।
यिनीहरू हिमालय पर्वत खण्डको दक्षिण पट्टिको पहाडी भागमा बसोवास गर्ने जातिका रूपमा पनि पौराणिक ग्रन्थहरूमा उल्लेख भएको पाइन्छ । महिषपाल वंशी अन्तिम राजा भुवन सिंहलाई पराजित गरी नेपाल खाल्डोको शासन सत्ता यस जातिले हत्याएका थिए भन्ने विश्वास गरिन्छ । बिभिन्न पौराणिक श्रोतहरूमा यस जातिको उल्लेख भएबाट यो जाति प्राचीन जाति भएको पुष्टि हुन्छ । किरात शब्दको अर्थका आधारमा कतिपय विद्धानहरूले सिमानामा बस्ने जाति वा आर्यहरूलाई सम्मानसरण गरेरदिएर आफ्नो भूमीमा राखेर राज्य गर्ने जातिहरू भन्ने गर्दछन् । संस्कृतमा किरात शब्दको अर्थ वन प्रान्तमा घुम्ने मानव समूह भन्ने हुन्छ । संस्कृत साहित्यमा विभिन्न प्रसंगमा प्रयुक्त यस शब्दको प्रयोग जाति र देशको अर्थमा प्रयोग भएको पाइन्छ । जातिको रूपमा यस शब्दको प्रयोग शुक्लयजुर्वेद, अर्थववेद, वाल्मीकि रामायण र महाभारतका बिभिन्न प्रसंगमा भएको छ । यजुर्वेदमा “गुहाम्य महात्मा” अर्थात गुफा बस्ने वा जंगलमा घुम्ने जातिका रूपमा बर्णन गरिएको छ । इतिहासशिरोमणि बाबुराम आचार्यले भारतको पूर्वोत्तर प्रदेशमा बस्ने आग्नेयदेशी परिवार अन्तर्गत नेपार जातिलाई किरात मानेका छन् ।
बिक्रम जित हसरत तथा अन्य केही विद्धानहरूले किरात शब्दको उत्पत्ति भूमध्ये सागरीय क्षेत्रमा बोलिने मोवाइट भाषाको किरीयाट भन्ने शब्दबाट अपभ्रंश भई किरात भएको उल्लेख गरेका छन् । किरातहरूको मूल बेबिलोन भएको र यिनीहरू ईसापूर्व २४०० तिर आफ्नो मूलथलो छोडी मेसोपोटामिया तर्फ लागेको मानिन्छ । कतिपयले किरातहरूको उद्गमस्थल अफ्रिकालाई पनि मानेका छन् भने पर्सियाको उत्तरी मैदान र मिश्रलाई समेत किरातहरूको उद्गम स्थलका रूपमा कतिपय इतिहासकारले मानको पाइन्छ । सामान्यतया हिन्दमहासागर र चीन आसपास क्षेत्रमा वसोवास गर्ने मानव नश्लको शारीरिक बनावट मिल्ने हुँदा चीन, जापान, कम्बोडिया, अफ्रिका, भियतनाम र भारतको आसाम, नागाल्याण्ड, मणिपुर आदि क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मंगोल जाति र नेपालको पूर्वी भागमा बसोबास गर्ने राई लिम्बू लगाएतका जनजातिहरूको शारीरिक बनावट एवं उद्गमस्थल एउटै रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । इतिहासविद् इमानसिंह चेमजोङ्गले पनि भोटवर्मेली भाषा बोल्ने जातिहरूलाई किरात कै शाखा मानेका छन् । किराती ग्रन्थ मुन्धुममा उल्लेख भएअनुसार “मनाफेवामाङ” नामक किराती राजा चीनको सिचुवान प्रान्तबाट तिब्बत आएका थिए भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ भने नेपालको हकमा यिनीहरू बाहिरबाट नै नेपाल खाल्डोमा प्रवेश गरेका थिए ।
"https://ne.wikipedia.org/wiki/विशेष:MobileDiff/672625" बाट अनुप्रेषित